Vaovao - Torohevitra momba ny fiharatra ho an'ny vehivavy
Rehefa manaratra tongotra, tongony na faritra bikini, ny moisturization mety dia dingana voalohany lehibe. Aza manaratra mihitsy raha tsy mandena ny volo maina amin'ny rano aloha, satria ny volo maina dia sarotra ny manapaka ary manapotika ny moron-kiran'ny hareza. Ny kofehy maranitra dia zava-dehibe amin'ny fiharatra sy fihogoana ary tsy fahasosorana. Ny hareza manotra na misintona dia mila bao vaovao avy hatrany.
1.Afangaro amin'ny rano mandritra ny telo minitra ny hoditra, avy eo apetaho gel misy fiharatana matevina. Manondrika ny volo ny rano, manamora kokoa ny manapaka, ary ny gel manaratra no manampy hihazona ny hamandoana.
2. Mampiasà lava, na kapoka aza nefa tsy asiana tsindry be loatra. Sasao tsara ny faritra misy taolana toy ny kitrokely, shins ary lohalika.
3. Ho an'ny lohalika, miondrika kely hisintona mafy ny hoditra alohan'ny aharatra, satria ny hoditra mivalona dia sarotra aharatra.
4. Mijanona mafana hisorohana ny fivontosan'ny gisa, satria ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny hoditra dia mety hanasarotana ny fiharatana.
5. Ny lelan-tady nofonosina tariby, toy ireo namboarin'i Schick® na Wilkinson Sword, dia manampy amin'ny fisorohana ny fikoropahana sy ny fahatapahana. Aza manindry mafy! Avelao fotsiny ny lelany sy ny tahony hanao ny asany ho anao
6.Tadidio ny fiharatana amin'ny fitomboan'ny volo. Araraoty ny fotoanao ary aharatra tsara ny faritra mora tohina. Mba hiharatra lava kokoa, dia manaratra tsara ny voan'ny fitomboan'ny volo.
1. Manosihosy hoditra ary asio gel manaratra fihosana matevina.
2.Asandrato ambony ny sandrinao rehefa manaratra volom-borona mba hisintona henjana ny hoditra.
3. Ahosorosy hatrany ambany ka hamelana ny hareza hihosotra amin'ny hoditra.
4. Sorohy ny fiharatana ny faritra mitovy mihoatra ny indray mandeha, mba hampihenana ny fahasosorana amin'ny hoditra.
5. Ny lelan-tady nofonosina tariby, toy ireo namboarin'i Schick® na Wilkinson Sword, dia manampy amin'ny fisorohana ny fikoropahana sy ny fahatapahana. Aza manindry mafy! Avelao fotsiny ny lelany sy ny tahony hanao ny asany ho anao.
6. Fadio ny manapotra deodorants na antiperspirants avy hatrany aorian'ny fiharatana, satria ny fanaovana izany dia mety hiteraka fahasosorana sy fanindronana. Mba hisorohana an'io, manaratra tazomoka amin'ny alina ary omeo fotoana hipetrahana ny faritra alohan'ny hampiasana deodorant.
1.Afangaro amin'ny rano ny volo mandritra ny telo minitra ary apetaho gel fiharatana matevina. Ilaina io fiomanana io, satria ny volo any amin'ny faritra bikini dia mazàna matevina kokoa sy matevina ary mahitsy kokoa, ka sarotra kokoa ny manapaka.
2. Tantano moramora ny hoditra amin'ny faritra bikini, satria mahia sy malefaka.
3. Ahosory amin'ny marindrano, avy any ivelany ka hatrany amin'ny faritry ny feny ambony sy ny lalan-tratra, mampiasa kapoka malefaka na dia.
4. Ahosory matetika mandritra ny taona mba hitazonana ny faritra tsy misy fahasosorana sy volo mitete.
Hetsika aorian'ny fiharatana: Omeo 30 minitra ny hoditrao
Ny hoditra dia mora tohina avy hatrany aorian'ny fiharatana. Mba hisorohana ny fivontosana dia avelao ny hoditra hiala sasatra farafahakeliny 30 minitra mialoha:
1. Fampiharana menaka fanosotra, moisturizer na fanafody. Raha tsy maintsy mando avy hatrany aorian'ny fiharatana ianao dia safidio ny crème crème fa tsy losion, ary sorohy ny menaka fanosotra izay mety misy asidra alpha hidrokrika.
2. Mandeha milomano. Ny hoditra vao voaharatra dia mora tohina noho ny vokatry ny klôro sy ny rano masira, ary koa ny menaka fanosotra sy sunscreens misy alikaola.